Ahafahana manokatra ny boaty araka ny tokony ho izy ny fanalahidina caviar Rova Caviar Madagascar, vita amin’ny takela-barahina
Kojakoja mihaja indrindra ampiasaina rehefa handroso kaviara ny fanalahidy. Sahala amin’ny boaty misy ny kaviara ny endriny, ary voasikotra eo ny sary famantarana mampiavaka ny orinasa. Fitaovana sarobidy tokony hananan’ny olona rehetra te hanandrana kaviara izy…
Apetraho moramora eo ambonin’ny ranomandry ny boatina kaviara. Mialoha ny ihinanana azy dia avelao hijanona mandritra ny 5 minitra eo ho eo aloha ny kaviara rehefa avy sokafana. Rehefa misokatra ny boaty dia tsy maintsy hohanina ao anatin’ny 24 ora ny kaviara.